ကိုယ်ပိုင် Web Site တစ်ခုကို သုံးမိနစ်နဲ့လုပ်ရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကိုယ်ပိုင် Web Site တစ်ခုကို သုံးမိနစ်နဲ့လုပ်ရအောင်
ကိုယ်ပိုင် Web Site တစ်ခုကို သုံးမိနစ်နဲ့လုပ်ရအောင်
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Jul 6, 2011 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 40 comments
ကိုယ်ပိုင် Web Site
Weebly နဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုလုပ်ရအောင်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ www.Weebly.com မှာ sign up လုပ်ရပါတယ်..
Full name မှာ ကိုကြိုက်တာထားပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ kokolusoe လို့ပေးထားပါတယ်
Email မှာတော့ ကို့အီးမေးကိုပေးလိုက်ပါ..muyar18@gmail.com ကိုပေးထားပါတယ်..
Password ကတော့ ဂျီမေးစကားဝှက်နဲ့မတူလည်းရပါတယ် ကိုကြိုက်တာထားပါ..တစ်ခုသတိထားရမှာပါ
Weebly မှာ log in ၀င်တဲ့အခါ ဒီ mail နဲ့ password ကို ပြန်လည်အသုံးပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မေ့မသွားဘို့ပါ။
အဲဒါပီးရင် မိမိရဲ့ ဆိုဒ် ကျလာပါတယ်… sign up လုပ်ပီးသွားရင် weebly မှာ မိမိအကောင့်နဲ့
ကြိုက်သလောက်ဖွင့်လို့ရပါတယ် ပုံကိုကြည့်ပါ My Site ရဲ့ဘေးမှာ Add site ဆိုတာလေးနဲ့ ထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။
ကဲ ဆိုဒ်ကို စလုပ်ရအောင်.. Edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ပထမဆုံး Elements .ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Basic / Multimedi/ Revenue/ More ဆိုတာရှိပါတယ်
Elements ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆိုဒ်အတွက် ပို့စ်ကို ထည့်တာ ပါ..
Design ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာတော့ လူကြီးမင်းတို့ ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Page ဆိုတာကတော့ မိမိရဲ့ ဆိုဒ်မှာ စာမျက်နှာဘယ်နှစ်ခုထားချင်တာလည်းဆိုတာကို Add ပီးထားလို့၇ပါတယ်။ ပီးရင်တော့ save လိုက်ပါ။
Editors ဆိုတာမှာတော့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ပြင်တာပါ..:P
Settings ဆိုတာမှာတော့ site ကို နာမည်ပြောင်းလို့ရသလို ပုံတွေပါချိန်းလို့ရပါတယ်။
Weebly ရဲ့ Basic ဆိုတာကတော့ ဆိုဒ်လုပ်တဲ့အခါ html မသိတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်.
Title Text ဆိုတာကတော့ မိမိတင်မဲ့ ပို့စ်အတွက် ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာပိုဒ် တစ်ပါတည်းထားပေးထားတာပါ။
Paragraph with picture ဆိုတာကတော့ ဓါတ်ပုံနဲ့တွဲတင်ချင်သူများအတွက်ပါ..တင်တဲ့အခါမှလည်း မလိုပါဘူး မောက်စ်နဲ့ ဆွဲလိုက်ယုံပါပဲ။ အဲဒီလိုလေးပဲစမ်းလုပ်သွားပါ။
Multimedia မှာတော့ သီချင်းတွေ သီချင်းတွေတင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါ။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့လည်းစမ်းလုပ်ကြည့်ပါ နမူနာကြည့်ချင်ရင် www.lotaya.weebly.com
ပင်မစာမျက်နှာအတွက် အလှဆင်ထားတာကတော့ ဥပမာ နာရီဆိုပါတော့ နာရီထည့်မယ်ဆိုရင်
Basic မှာ Custom HTML ဆိုတာရှိပါတယ် အဲဒါလေးကို ဆွဲယူပီး စာမျက်နှာထဲကိုထည့်လိုက်ပါ.
HTML Code မရေးတက်ရင် ကျွန်တော်ဆိုဒ် ပင်မစာမျက်နှာမှာ တင်ထားတဲ့ နာရီပုံ/ ပုံအားလုံးရဲ့အောက်မှာလင့်ခ်လေးတွေရှိပါတယ်
ဒီစာသားလေးက flash text လေးပါ
အပေါ်ကလင့်ခ်လေးက တော့ နာရီထည့်တဲ့လင့်ခ်လေးပါ
အဲဒီလင့်ခ်တွေကို ယူပီး ကိုထားချင်တဲ့ဟာကို အဲဒီလင့်ခ်တဆင့်ထားပီး Html ကုဒ်လေး ယူလိုက်ပါ ကော်ပီ/ ပေ့ ပေါ့ ပီးရင် ခုဏက Html အကွက်ထဲကို paste လုပ်လိုက်ပါ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဆိုဒ်မှာ နာရီလေး ရောက်သွားပါလိ့မ်မယ် .
လိုအပ်တာရှိရင် lotaya.weebly@gmail.com ကို အက်ပီးမေးနိုင်ပါတယ်..
မှတ်ချက်။Fwd – Mail တွေ မပို့ပါနဲ့ ဖျက်ရတာအလုပ်ရှုပ်လို့ပါ.. နောက်ပီး gtalk chat ဘို့အတွက်ဆိုရင် မအပ်ပါနဲ့..အကောင်းဆုံးကတော့ မေးပို့ပီးမေးတာပိုကောင်းပါတယ်…အကောင့်ကြေငြာမဟုတ်ပါ.. mandalaygazette ကို ဖတ်ကြတဲ့လူတွေ နည်းပညာတိုးတက်စေချင်လို့ သိသလောက်ရှဲတာပါ.
ကျွန်တော့်ထက် တက်တဲ့ ဆျာကြီးတွေရှိပါတယ်… လူဆိုး ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး ၀ါသနာတူခြင်း မျှဝေတာပါ.
ဓါတ်ပုံမတင်မိတော့ full site နဲ့တင်လိုက်မိတယ်. ပြန်ကြည့်တော့မှ ကြည့်တာအဆင်မပြေဘူး
နောက် ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ့မယ်. ကိုယ်တိုင်အချိန်ပေးပီး ရေးထားတာပါ ၁၅ မိနစ်လောက်ပေါ့
ကော်ပီ ပေ့ ဖြစ်ပေမယ့် ဖတ်တဲ့သူတွေ ဗဟုသုတရရင်လည်းကောင်းတာပဲ.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကပဲမှီမှီ
web သမားတွေဆို သိပါတယ် ကိုရှဲလိုရင် ရှဲတဲ့ဆိုဒ်ကို ထည့်ပေးရတယ်ဆိုတာ အထူးတလည်ထောက်ပြနေ
တင်တဲ့လူရဲ့ စေတနာကို အလေးထားသင့်ပါတယ်..
ကောင်းပါတယ် ဗျာ ။ ကွန်နက်ရှင် ကောင်းတဲ့အခါ မှ စမ်းကြည့်ဦးမယ် ကျေးဇူးပဲ လူဆိုးလေး
ပုံတွေ တတ်နိုင်သလောက် ..ပြန်ညှိပေးထားပါတယ်..။
တခြား..content management system (CMS) တွေလည်း စမ်းကြည့်ေ၇းကြည့်ပါဦး..။
MySQL, php ဖက်ကို ဦးစားပေးကြည့်ပါ..။
အနော့်ဟာကို ဘယ်လိုပြန်ပြင်တာလည်းဟင် kai က သူကြီးလား..လူဆိုးစကားဝှက်လည်းမသိပဲနဲ့နော်
လူကြီးကို လူကြီးမှန်း မသိဘူးလား လူဆိုးလေးရဲ့။
web site တစ်ခုစမ်းဆောက်ကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဟုတ် ရပါတယ်..မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါ. အလကားလုပ်လို့ရပီးတော့ အရမ်းလည်းမခက်လို့ပါ. html အကြောင်းတွေရေးပေးပါ့မယ်.
စမ်းကြည့်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ်.. ကျေးဇူးပါ အဲလိုမျိုးလေးတွေပဲ ထပ်တင်ပေးပါနော်..
ကဲ မန်းကေဇတ်က အနုတ်လုပ်တဲ့လူတွေခင်ဗျာ… ကြိုက်သလောက်သာ လုပ်ကြပါ ဂရုလည်းမစိုက်ပါဘူး။
ကိုလည်းမလုပ်နိုင် သူများလုပ်တာလည်းအားမပေးတဲ့လူမျိုးက ဘယ်လိုလူမျိုးထဲမှာပါတယ်ဆိုတာ ကို့ဘာသာ ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့.အခု မန်းကေဇတ်က လူတွေက အချင်းချင်း အားမပေးပဲ အမြဲတိုက်ခိုက်နေကြတယ်.
ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးထားတာ ..ကြိုက်သလောက်သာလုပ် ..ဂရုကိုမစိုက်တာ
အွန်…….. အလကားရ တာဘာမှရှိတော့ဝူးလေ…..
ရေတောင် ၀ယ်ငောက်ရတဲ့ခေတ်မှာ ကိုကို အောင်ပုကလည်း
အွန် ဟုတ်ဘူးလေ မတောင်းပါဘူး .. update တော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့…
ကျနော်.ရဲ.ဆိုဒ်လေးပါ အခုမှsetting ထိုင်နေတုန်းမို.လို.ပါ
အစ်ကိုရေ ၀င်ဖတ်တဲ.သူတွေ post တင်ချင်ရင်ဘယ်ကနေလုပ်ရလဲပြောပြပေးပါလား
ဟုတ် ကို ဖိုးတွမ်တီးရေ
ပေးထားတဲ့နာမည်လေးကလည်းကောင်းပါတယ်.. ဆိုဒ်လေးကလည်းပြည့်စုံပါတယ်။ အားလည်းအားပေးပါ့မယ် မသိတာရှိရင်လည်းမေးပေါ့။
၀င်ဖတ်တဲ့လူတွေကတော့ form မဟုတ်တဲ့အတွက် ပို့တင်လို့မရပါဘူး..
ကို့အတွက်သီးသန့်ဆိုဒ်တစ်ခုပါ.. မှတ်ချက်တွေထားလို့တော့ရပါတယ် chat box ပေါ့
ဆွေးနွေးခန်းက ချက်ဘောက်မှာပဲဆွေးနွေးလို့၇ပါတယ် တစ်ခုတော့ ရှိတယ် စီဘောက်စ်ကို အကြီးကြီးထားပေးလိုက်ပေါ့။ ပင်မစာမျက်နှာမှာပဲလေ…ကိုတွမ်တီးတင်ထားတဲ့ ပင်မစာမျက်နှာရဲ့
အောက်မှာ နည်းပညာဆွေးနွေးရန် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စီဘောက်စ်လေးတစ်ခု ထားပေးလိုက်တာ ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်..
နမူနာအနေနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သူအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ဆိုဒ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ် သွားကြည့်လို့ရပါတယ်
http://cbox.ws မှာ ကို့အီးမေးနဲ့ register လုပ်လိုက်ပါ
ပီးရင် စီဘောက်စ်ဆိုဒ်ကိုထားပေးလိုက်ပါ .. html ကုဒ်လေးရပါတယ် အဲဒီကုဒ်လေးကို
basic မှာ Custom html ဆိုတာလေးရှိပါတယ် ကို့ page ထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်ပါ. အဲဒါဆို၇င် ရပါပီ ကိုတွမ်တီးရဲ့ ဆိုဒ်မှာ စီဘောက်စ်လေးမှာ မှာချင်တာတွေမှာခဲ့လို့ရပါပီ။
အဲဒီ html ကုဒ်လေးကို ကူးပီး basic ထဲက custom html ထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ..အကွက်လေးကိုတော့ သေးထားဘို့လိုပါတယ် အကွက်သေးချင်ရင်တော့ layout ထဲမှာရှိပါတယ်။
ကောင်တာဆိုတာ တော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ
ကိုတွမ်တီးရဲ့ဆိုဒ်မှာ လာလည်တဲ့အရေအတွက်ကိုသိချင်ရင် အပေါ်ကနည်းအတိုင်းပဲ
http://www.99counters.com/ မှာ signup လုပ်လိုက်ပါ ပီးရင် html ကုဒ်ကို အထက်ပါနည်းအတိုင်း ထည့်လိုက်ပါ။
နောက်ပီးတော့ ပင်မစာမျက်နှာမှာ ချက်ဘောက်စ် ထည့်ပေးလို့၇ပါတယ် စီဘောက်နဲ့မတူပါဘူး
http://chatroll.com/solutions/live-chat-software အဲဒီမှာ signup လုပ်ပီး html ကုဒ်ယူပါ..
လိုတာရှိရင်တော့ထပ်မေးထားပေါ့ ကိုတွမ်တီးရေ လူဆိုးအွန်လိုင်းအမြဲရှိပါတယ် ကိုတွမ်တီးရဲ့ နည်းပညာဆိုဒ် တိုးတက်ပါစေး)
ကဲ….လိုတာရှိရင်တော့ထပ်မေးထားပေါ့ ကိုတွမ်တီးရေ လူဆိုးအွန်လိုင်းအမြဲရှိပါတယ် ကိုတွမ်တီးရဲ့ နည်းပညာဆိုဒ် တိုးတက်ပါစေး)
ပြန်ဖြေပေးရာမှာ စာအများကြီးတင်လို့မရလို့ ပို့တွေခွဲပီးတင်ပေးမိတာပါ။
ဓါတ်ပုံတင်တာက ရပါတယ် ကိုတွမ်တီးရဲ့ လွယ်ပါတယ်
Multimedia ထဲက Photo Gallery နဲ့တင်ထားပေါ့
ဓါတ်ပုံနဲ့စာ တွဲပီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ Paragraph with Pictur နဲ့တင်ပါ တစ်ပုံချင်းတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကွန်နရှင်အခက်အခဲရှိမယ်နဲ့တူတယ်
lotaya.weebly.com ပင်မစာမျက်နှာမှာ ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ် photo Gallery နဲ့ပါ။
နာရီလေးတွေ့နေရပီနော် ကိုတွမ်တီးး)))
weebly မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် လက်ခံပါတယ် ကို တွမ်တီးရေ page တွေမှာ မြန်မာလိုထားလို့ရပါတယ်။
ကောင်တာလေးပါ ထည့်လိုက်ပါ ။ပိုကောင်းလိမ့်မယ်
ကိုအက်လိုက်ပါ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းထိုင်သမျှ ၀င်ဖတ်တဲ့စာမှန်သမျှ ဖေ့ဘွတ်မှာ note နဲ့သိမ်းထားပါတယ်
ကိုနောက်ပြန်ဖတ်လို့ရအောင် အဲဒီထဲက ရှဲလိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဓါတ်ပုံတွေ ဖိုင်တွေထည.်လို.မရဘူးဗျာ error တက်နေတယ်
Please try the upload again or takealook at our
troubleshooting guide to find the cause and solution.
ကဲအဆင်ပြေပါစေ ပို့တင်တာက အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်သုံးခါလောက်ပြန်တင်ရတယ်….
တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ကတော့ weebly ထက် http://www.web.com ကို ပိုသဘောကျတယ်။
စမ်းကြည့်တာပေါ့ဗျာ..။ blog spot တို့ world Press တို့နဲ့ ဘာများကွာသလဲဆိုတာ သိရင်ပြောပြပေးပါဦး ။ သေချာလုပ်ပြီးမှ ဟို NINE Site တို့လို ပိုက်ဆံတောင်းနေမှဖြင့်..ဒုက္ခရောက်မှာဆိုးလို့..။
ဟုတ် နာမည်ကွာပါတယ် တစ်ခုရှိတာက ဒီကောင်က html မရေးတက်တဲ့လူအတွက် ပိုပီးအဆင်ပြေနေလို့ပါ ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုလုပ်ပေါ့.
ဘလောဂ့်စပေါ့ကတော့ လုပ်ချင်တာ အားလုံးပြင်ဆင်ရတာလွယ်တယ်။ နောက်ပိုင်း မြန်မာက အပြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက် ဝေါ့ပလတ်ကို အကုန်အသုံးပြုလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
http://www.vectorvault.com ဒီဆိုက်တွေမှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ယခုလို နည်းပညာများမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..နောင်လည်းဆက်လျှက်ပြီးမျှဝေနိုင်ပါစေ….
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒီဆိုက်က မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားနဲ့တော့ ၃ မိနစ်လုပ်လို့ရပေမယ့် ပိုစ်တင်တာတို့ ဓာတ်ပုံတွေတင်တာတို့က အတော်ကို လုပ်ဒင်လုပ်တာ အရမ်းကြာတဲ့အတွက် ၃ နာရီတောင် အဆင်မပြေပါဘူးရှင်။ မနော အရင်တုန်းကတော့ စမ်းဖူးတယ်ရှင့်။ ခုတော့ ပစ်ထားခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ။
http://yaminaye.weebly.com/ ဒီဟာလေး စမ်းသပ်ခဲ့တာ ကွန်မကောင်းလို့ စိတ်နာလို့ ထားခဲ့ပါတယ်။
Joomla နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Create website with joomla CMS လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မြန်မာလိုစာအုပ် ပထမပိုင်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မှားတာများ၊ ပြုပြင်ရန်များပါရင် မေးလ်ပို့ပေးပါဦး
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ Web Site တွေကို ခုရော နောက်ရော သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စက်တွေကို မကြာခဏ Defrag ချပေးသလိုပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့် Site ကို ကိုယ် ဘယ်လို check လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လျောက် ဖတ်ကြည့်တော့ online tools (၁၀) ခုရှိပ…ါတယ်တဲ့။ အဲဒီလို check လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဆိုက်ကို ပြုပြင်လိုက်မယ် ဆိုရင် Performance (စွမ်းဆောင်ရည်)၊ accessibility (သုံးစွဲရလွယ်ကူမှု)၊ compatibility (သုံးစွဲရ အဆင်ပြေမှု) စတာတွေ တိုးလာမယ်ဆိုပါတယ်။ ၀က်သမားတွေ အတွက် မရှိမဖြစ် အချက် (၁၀) ချက်ပေါ့ဗျာ။
ဒါလေးကတော့ ကိုယ်ဆိုက် အခြေခံ information (သတင်းအချက်အလက်) တွေကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ကိုယ့် ဆိုက်ကို dial-up user တစ်ယောက်က သုံးတဲ့ အခါ Site Loading ဘယ်လောက် ကြာမယ် ဆိုတာတွေ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဆိုက်မှာ ပြတ်နေတဲ့ လင့်တွေ ဘာတွေရှိတယ် ဆိုတာတွေ ဘယ်လင့်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေတယ် ဆိုတာတွေ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ၀င်ပြီး သုံးနေကြတယ် ဆိုတာ တွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သုံးကြည့်တော့ အဆင်မပြေဘူးဗျ။ အဲဒီ ဆိုက်ကတော့ ပိတ်သွားပြီတဲ့ဗျ။ Google Analytic ထည့်ထားရင်လည်း အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
CSS တွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့ တိုတိုနဲ့ ထိရောက်အောင် လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ကလစ်ကနေ သွားစစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုက်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ fix errors (အမှားတွေကို ပြင်နိုင်တာ) ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ CSS coding ကို ကူးပြီး ထည့်လိုက် ပြီးရင် အဲဒီ CSS ကိုယ် သုံးထားတဲ့ ကိုယ့်ဆိုက် လိပ်စာကို ထည့်လိုက်တာနဲ့ အားလုံး ပြည့်စုံအောင် စီစဉ် ပြုပြင်ထားတဲ့ ကိုယ့် အတွက် CSSဗားရှင်း တစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပြီး သုံးမယ်ဆိုရင် ၂၅% လောက်တောင် မြန်လာတယ်ဆိုပဲဗျ။ CSS Errors တော်တော်များများကိုလည်း ရှင်းပြီးသားဖြစ်သလို၊ Coding တွေကိုလည်း Compress လုပ်ပြီးသား ထွက်လာပါတယ်တဲ့။ တကယ့် ဆရာကြီးတွေကတော့ သုံးစရာလိုချင်မှ လိုမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်ကတော့ သုံးလို့ အဆင်ပြေမှပြေပဲ။
ဒီကောင်ကလည်း CSS ကိုစစ်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Browser အားလုံးမှာ သုံးလို့ရတဲ့ CSS ဖြစ်အောင် စစ်တာဗျ။ စမ်းကြည့်ပါ။
ဒါကတော့ ဆရာအကျဆုံး စမ်းသပ်ရေးပဲဗျ။ ဒီကောင်နဲ့ စစ်ပြီးလို့ Errors တစ်ခုမှ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား Site ကို ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် ဖြစ်ပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ ဒီ Web Tool နဲ့ Google ကို စစ်လိုက်တာ Errors ၃၁ ခု တွေ့တယ်ဆိုပဲ။ စမ်းကြည့်ပါ။
ဒါကတော့ Web Site ကိုကြည့်ရှုသူတို့ ဖက်က မြင်ရမယ့် ကိုယ်ဆိုက် Design ကို စစ်ကြည့်တာဗျ။ mmopenxteam ကို ထည့်ကြည့်တာ ရေရေလည်လည် စိတ်လေသွားတယ်။
ဒါကတော့ဗျာ Browser ပေါင်းစုံမှာ ကိုယ့်ဆိုက် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကို စမ်းပေးတဲ့ Visual Tool ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Browser တွေ အကုန်လုံး စက်ထဲမှာ Install လုပ်ထားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ScreenShot တောင်ရနိုင်တယ်ဗျ။ Windows Platform, Linux Platform, Mac Platform တော်တော်စုံစုံရနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒါကတော့ ကိုယ့် Web Site ကို Mobile ဖုန်းမှာ အဆင်ပြေနိုင်မလား ဆိုတာ စမ်းသပ် နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ခုနောက်ပိုင်း 3G ဖုန်းတွေ အတွက် အဆင်ပြေမလားပေါ့ဗျာ။ ဒီဆိုက်ကတော့ ကိုယ့် Web Site ကို Mobile ဖုန်း Ready ဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ ညွှန်ပြ ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
ဒါကတော့ တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့ tool တစ်ခုပါခင်ဗျ။ အဓိက ဖော်ပြပေးနိုင်တာကတော့ ကိုယ့် Web Site ရဲ့ Loading Speed ကိုပါ။ တစ်ခုခြင်းစီကို Graph နဲ့ပြတာ ဗျို့။ သုံးကြည်လိုက် ကြိုက်မှာပါ လို့ ပြောလို့ရတယ်ဗျ။
ဒါကတော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Web Site ကို လူနားလည်လားလို့ စမ်းကြည့်တာဗျ။ ကိုယ်ရေးတုန်းကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ နားလည်တယ်။ သူများသုံးတော့ ဘယ်လောက် နားလည် နိုင်မလဲဆိုတာ စမ်းသပ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။